पाल्पामा स्वाब संकलन तिव्र, गाउँभित्र फैलिँदाे सङक्रमण - Sero Fero News
पाल्पामा स्वाब संकलन तिव्र, गाउँभित्र फैलिँदाे सङक्रमण
पाल्पा, जेठ १०
पाल्पाका स्थानीय तहहरूले स्वाव संकलनकाे कार्यलाइ तिव्रता दिएका छन् । झण्डै एक हप्ता किट अभावमा राेकिएकाे स्वाव परीक्षणकाे कार्य गर्न जिल्लामा किट अाएसँगै पालिकाहरूले स्वाव संकलनलाइ तिव्रता दिएका हुन् ।
टोलटोलमा लक्षण सहितका बिरामी छन् । अधिकांशले जाँच गर्ने र औषधि खानलाई नै हिच्कीचाउँछन् । कोभिड १९ कोरोना अस्पताल हुँगीमा अहिले ६ जना सङक्रमित उपचाररत छन् । गाउँमा गाउँपालिकाले डाक्टर सहितको मेडिकल टिम खटाएरै उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ । मेडिकल अधिकृत डा. पूजन श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको टिमले उपचारका लागि बुटवल, रुपन्देही पुगेर उपचारसेवा नपाएपछि फर्किएका बिरामीलाई समेत सोही अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन् । हुँगी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख समेत रहेको डा. श्रेष्ठ भन्छन्, गाउँमा शहरबाट मानिसहरु आउजाउ गरिरहेका छन् । सबै संयमित भएर हेलचेक्राई नगर्ने हो भने कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ ।
गाउँगाउँमा ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी बढेका छन् । गाउँमा अहिले मकै खन्ने हतारो छ । कतै कुलो मर्मत, घर निर्माण, सडक निर्माणदेखी कतै बिहेभोजदेखी ब्रतबन्धका क्रियाकलापमा कुनै कमी देखिएको छैन । ज्वरो र खोकीका बिरामीले गाउँमा बोहरी, रुदिलो, बोझो, गुर्जो, बेलउतीको पात जस्ता जडिबुटीले सञ्चो भएको भन्दै गाउँ चहारी रहेका भेटिन्छन् ।
पूर्वखोला गाउँपालिकाभित्र अहिले १ सय ३१ कोरोनाका सक्रिय सङक्रमितहरु रहेका छन् । पूर्वखोलाको रिग्नेरहमा मानिसहरुको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन । यहाँ गाउँपालिकाकै धेरै सङक्रमितहरु रहेका छन् । यस्तै देविनगर, विरकोट र सिलुवामा पनि सङक्रमितहरु रहेको पूर्वखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले बताए । उनी भन्छन्, ‘गाउँपालिकाले अहिले अक्सिजन सहित १० बेड र थप १५ पालिका नै व्यवस्था गरेको छ । गाउँमा बढी भिडभाड नै देखिन्छ । मानिसहरुको दैनिकी परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो रहेछ ।’ पूर्वखोला गाउँपालिकाले ७७ बेड आईसोलेशन व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
पूर्वखोला गाउँपालिका एक सङक्रमितले भने मैले दैनिक खेतबारीको काम गरिरहेकै छु, म सावधानी अपनाएरै आफ्ना काम गर्दागर्दै सङक्रमित भएँ, अब पनि खेतिपातीको काम नगरि भएन । वैशाख दोस्रो सातादेखि जिल्लाको अधिकांश गाउँका प्रत्येक घरमा तीन÷चार जनासम्म बिरामी परे । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, जीउ दुख्ने, आलस्य बढ्ने, खान मन नलाग्ने, आँखा दुख्नेलगायत लक्षण लक्षण भए पनि उनीहरूको परीक्षण भएन । जिल्लाका कोरोना परीक्षण गर्ने किट अभाव हुँदा गाउँमा संकास्पद सङक्रमितहरु बढेपछि आईतबारदेखी भने किट आएसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य सुरु भएको छ । जिल्लाका तानसेन, रम्भा, रिब्दीकोट, रैनादेवी छहरा, माथागढी, तिनाउ, निस्दी, रामपुरमा घरघरैजस्तो ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी छन् । जसका कारण कतिपय टोलबस्ती सिल गरिएको छ ।
पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका कोरोना सङक्रमितहरुको आईशोलन खर्च व्यहोर्ने भएको छ । रम्भाले कोरोना बिरामी र उसको १ जना कुरुवाको आईशोलनमा बस्दाको लागेको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको रम्भा गाउँपालिकाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद रेग्मीले बताए । रम्भा गाउँकार्यपालिकाको बैठकले कोरोना सङक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई किरीया खर्च वापत ५० हजार रुपैयाँ समेत दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
जिल्लामा हाल १ हजार ४ सय २० जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । दैनिक एक सय भन्दा धैरै संख्यामा नयाँ कोरोना सङक्रमित थपिँएका छन् । पाल्पामा कोरोना संङ्मणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७९ पुगेको छ ।